Alshabaab oo weerarkii labaad ku qaaday taliska ugu weyn Amisom ee Xalane – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Mareeg.com: Rag hubeysan oo ka tirsan Al-Shabaab ayaa maanta weeraray saldhigga ugu weyn ee Howlgalka Midowga Afrika ee AMISOM ee Xalane ee ku yaalla magaalada Muqdisho, sida ay sheegeen mas’uuliyiin ka tirsan AMISOM.
Qaraxyo dhowr ah ayaa laga maqlay gudaha xarunta Xalane, waxaa sidoo kale halkaasi laga maqlay rasaas xoogan oo socotay ku dhawaad hal saac, waxaa muddo kooban hakad la geliyey howlha garoonka diyaaradaha Muqdisho.
AMISOM ayaa sheegtay in weerarka lagu dilay 5 ka tirsan dableydii ka dambeysay weerarka. Saddex askari oo ka tirsan AMISOM iyo qof rayid ah ayaa sidoo kale ku dhaawacmay weerarka, sida ay AMISOM ku sheegtay boggeeda Twitter.
Al-Shabaab oo sheegatay mas’uuliyadda weerarka ayaa sheegtay inay weerarka ku beegsatay xaflad ciidanka AMISOM ay ugu dabbaaldagayeen Ciidda Masiixiga oo saldhigga ka socotay.
Afhayeenka AMISOM Kornayl Cali Aadan Xaamud ayaa u sheegay wakaaladda wararka ee AP in ugu yaraan 8 dabley ah ay galeen saldhigga.
Sida AMISOM sheegtay, 3 ka mid ah dableyda ayaa la toogtay, labo kale ayaa isku ag qarxisay bakhaar shidaalka lagu kaydiyo, halka 3 kale la rumeysan yahay inay baxsadeen.
AMISOM ayaa xaqiijisay in dableyda Al-Shabaab ay gudaha u galeen xarunta, balse markii dambe xaaladda caadi lagu soo celiyay.
Saldhigga Xalane waa meel amnigeeda si adag loo adkeeyay oo u dhow garoonka diyaaradaha Muqdisho ee Aadan Cadde.
Ergeyga Qaramada Midoobey u qaabilsan Soomaaliya Amb. Nicholas Kay ayaa bartiisa Twitter ku soo qoray hadal kooban oo uu ku cambaareeynayo weerarka garoonka diyaaradaha lagu qaaday iyo Ciidamada AMISOM ay difaacayaan, isla markaana Argagixisada aanay marnaba hor-joogsan doonin horumarka Soomaaliya.